तालु खुल्याउँदैमा हिट भइन्छ ? सुरक्षाअघि नम्रता र दीपशिखाको ‘केश मुण्डन’ ले के गर्यो ? - Super Hit News
तालु खुल्याउँदैमा हिट भइन्छ ? सुरक्षाअघि नम्रता र दीपशिखाको ‘केश मुण्डन’ ले के गर्यो ?
फिल्ममा आफूले निर्वाह गर्ने चरित्रमा दुरुस्तै उत्रनका लागि केही कलाकारले निकै मिहीनेत गर्ने गरेको पाइन्छ । अझ् नेपाली फिल्मका कलाकारमा पछिल्लो समय मिहीनेत गर्ने बानीको राम्रै बिकास भएको छ । कतिपय हिरो–हिरोइन भने जस्तोसुकै रोलमा पनि एकै किसिमको ‘गेटअप’ र ‘लुक्स’ मा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । यतिसम्म कि, पुलिस अधिकृतको भूमिकामा रहेका राजेश हमालले लामो कपाल हल्लाउदै सत्य सेवा सुरक्षण् गरेको धेरै वटा फिल्ममा बग्रेल्ती देखियो । त्यति मात्रै होइन, गरिब, गाउँले युवाको भूमिकामा प्रस्तुत भएका भुवन केसीको खुट्टामा ढिंगो बुट पनि नदेखिएको होइन । बिहान–बेलुका छाक टार्नै धौ–धौ हुने पात्रको भूमिकामा निर्वाह गरिरहेको हिरोको कानमा सुनको टप पनि थुप्रैमा देख्न पाइन्छ ।
फिल्म त बनाउने तर कथाले मागेको चरित्रमा कलाकारलाई उतार्न नसक्ने निर्देशक तथा उत्रर्नै नचाहने कलाकार पनि बग्रेल्ती छन् लाइनमा । तर पछिल्लो समय आफू प्रस्तुत हुने पात्र र निर्वाह गर्ने चरित्रमा निकै मिहिनेत गर्ने कलाकार पनि बढ्दै गइरहेका छन् । पछिल्लो समय अभिनेत्री सुरक्षा पन्तले शिर मुण्डन गरेकी छिन् । उनले आफू अभिनीत ‘आमा’ फिल्मको कथाले मागेकाले शिर मुण्डन गरेको बताएकी छन् । आफूलाई फरक–फरक शैली,पात्र र भूमिका मनपर्ने र त्यसका लागि सक्दो मिहीनेत गर्न पछि नपर्ने भएकाले त्यसो गरेको उनको कथन छ । दीपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा सुटिङ भइरहेको ‘आमा’ मा सुरक्षा छोरीको भूमिकामा छिन् । उनको आमाको भूमिका मिथिला शर्माले निर्वाह गरेकी छिन् । ‘कपाल खौरदैमा राम्रो अभिनय गरेको भन्न मिल्दैन,’ सुरक्षाको ‘तक्लु’ फोटा हेर्दै एक फिल्मकर्मीले भने, ‘समग्रमा फिल्म कस्तो बन्छ, त्यसमा भर पर्छ ।’ उनले अगाडि थपे,‘कपाल खौरदैमा हलमा दर्शक ओइरिने भए नम्रता श्रेष्ठ मालामाल हुनुपर्ने हो ।’ ती फिल्मकर्मीले सुरक्षाले तालु खुइल्याएको कुरा ‘फन्डा’ मात्रै भएको दावी गरे ।
हुन त बिगतको कुरा कोट्याउने हो भने जुन जुन हिरो,हिरोइनले फिल्मका लागि तालु खुल्याएका छन्, ती फिल्म फ्लप भएको पाइन्छ । यसको ताजा उदाहरण हो, ‘जाइरा’ । यो फिल्मका लागि नम्रता श्रेष्ठले तालु खुइल्याउनुका साथै आठ महिना मार्शल आर्टस्को स्पेशल ट्रेनिङ लिएकी थिइन् । तर, फिल्मले बक्स अफिसमा कुनै कमाल देखाउन सकेन ।
त्यसअघि ०७५ को फागुन १० गते रिलिज भएको ‘प्रेमलीला’ फिल्ममा निर्मात्री तथा अभिनेत्री दीपशिखा खड्काले पनि तालु खुइल्याएकी थिइन् । ‘प्रेमलीला’ मा उनले शिर मुण्डन मात्रै गरेकी थिइनन्, पूरै टाउकोमा काटेको दाग पनि बनाएकी थिइन् । तर, अपशोच, फिल्मले दर्शकलाई कत्ति पनि रिझाउन सकेन । दीपशिखाले गरेको मिहिनेत पूरै पानीमा गयो । उनले केही नयाँ गर्न खोजेको तर दर्शकले वास्ता नगरेकोमा निकै चित्त दुखाइन् ।
केश मुण्डन गरेका नेपाली हिरोइनको कुरा गर्दा निशा अधिकारीको नाम छुटाउनै मिल्दैन । तर, उनले फिल्मका लागि भने केश मुण्डन गरेकी होइनन् । उनले त अमेरिका गएको बेलमा के सुर चलेर तालु खुइल्याएकी थिइन् । फिल्ममा भने उनको ‘तालुवाला’ लुक्स हेर्न पाइएन् । यद्यपी, ‘लुटेरा’ फिल्मको ‘मैले तिमीलाई मन परा’को अबस्था हो’ गीतमा भने उनले नक्कली कपाल लगाएर डान्स गरेकी छिन् ।
फिल्मका लागि केश मुण्डन गरेर आफूले निकै ठूलो ‘योगदान’ गरेझै प्रतिक्रिया सुरक्षाले दिने गरेकी छिन् । उनको यो ‘योगदान’ कत्तिको सार्थक होला, त्यसका लागि त फागुन ९ गतेसम्म नै कुर्न पर्छ । किन भने, ‘आमा’ फागुन ९ मा दर्शकमाझ आउदैछ । सुरक्षाको अहिलेसम्मको फिल्मी करिअरको मुल्यांकन गर्दा त्यत्ति सुखद भने पाइदैन । उनको डेब्यु फिल्म ‘अझै पनि’ थियो । त्यसपछि उनले ‘धनपति’, ‘भैरे’,‘चंगा चेट’,‘सुस्केरा’,‘गोपी’ ‘घर’ लगायतका फिल्ममा अभिनय गरिन् । ‘सुस्केरा’ दर्शकमाझ आइसकेको छैन । ‘रिलिज्ड’ उनका फिल्मले निर्माता भने जोगाएका छैनन् । उनी बिशेषगरी निर्देशक दीपेन्द्र के खनालका फिल्म (‘धनपति’,‘चंगा चेट’,‘घर’,‘आमा’) मा दोहोरिरहने गरेकी छिन् ।
Tags: Aama New Nepali Movie, Namrata Shrestha, Nisha Adhikari, Surakshya Panta
Previous रिमालाई नाँचौ छम्मा छम्मा भन्दै भुवन
Next मिस्टर वल्र्डबाट अक्षयले भित्र्याए मल्टिमिडिया अवार्ड
‘पोई पर्यो काले’ युटुबको शिर्ष स्थानमा